Igumbi lokulala eli-1 elithandekayo kwaye elinesitayile ngaphandle w / indawo yokupaka yasimahla - I-Airbnb
Igumbi lokulala eli-1 elithandekayo kwaye elinesitayile ngaphandle w / indawo yokupaka yasimahla
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMelinda
Yonwabela amava anesitayile kule ndawo isembindini. Kumzuzu omnye ukusuka
Ulwandle apho unokufumana zonke iindawo zokutyela ezidumileyo kunye nebar. Indawo yokupaka yasimahla emva kwesakhiwo.
I-studio yanamhlanje kunye nesitayela ifanelekile kwisibini. Ikhululekile kakhulu kwaye ine-air conditioning ephezulu, indawo intle kwaye ivulekile. Ibekwe kumgangatho wokuqala kwaye inendawo encinci yokuhlala phambi kwendlu ukonwabela ikofu yakho yasekuseni okanye iti.
I-studio ye-studio ikufutshane ne-deli encinci esecaleni kunye nezinto zokutya zasekhaya. Kwakhona iivenkile ezininzi zokutya kunye nebhlokhi enye kude nevenkile enkulu kakhulu kunye nomzuzu kude nolwandle olubanzi apho zonke iibhari ezidumileyo kunye neendawo zokutyela zifana nebhari yepalapa, abalahlekileyo, ibha yesanti njl.njl.
Ndiyathanda ukunika indawo yeendwendwe zam kodwa ndishiya zonke iinombolo zam kwaye ndihlale ndilindile kuyo nantoni na abayidingayo.